Primary Health Care – Page3– My Doctor
DrMay ThantSyn	2019-05-10T11:04:39+00:00
သွေးတိုးအကြောင်း သွေးပေါင်ချိန်တက်တိုင်း သွေးတိုးရောဂါ မဟုတ်ပေမဲ့ သွေးပေါင်ချိန် 130/80 ထက် ပိုတက်ဖူးရင်တော့ သွေးတိုးရောဂါဟုတ်မဟုတ် အမြဲစောင့်ကြည့်နေဖို့လိုပါတယ်။ ခုခေတ်မှာတော့ အိမ်မှာပဲ Digital သွေးပေါင်ချိန်စက်တွေနဲ့ အလွယ်တကူ ကိုယ့်ကိုယ်ကို စောင့်ရှောက်လို့ ရနေပါပြီ။ သွေးပေါင်ချိန်စက်ဘာအမျိုးအစားသုံးမှာလဲ? "အမြဲတမ်း အဖြေတွေမှန်ကန်တိကျတယ်" လို့ဆရာဝန်တွေရဲ့ထောက်ခံမှု အများဆုံးရထားတဲ့ကမ္ဘာကျော်
DrMay ThantSyn	2019-04-29T19:49:13+00:00
🔺လူတွေသိပ်မသိသေးတဲ့ အဖျားရဲ့ လှို့ဝှက်ချက်များ🔺 🎯 အဖျားဆိုတာဘာလဲ ?? 'အရင်း'ရဲ့ အပေါ်ဘက်ထိပ် လို့တော့ စကားကပ်မပြောကြေးပေါ့။ အဖျားဆိုတာ လူတိုင်းဖြစ်ဖူးတဲ့ ဝေဒနာ တစ်မျိုးပါ။ Fever လို့ ခေါ်သလို Febrile illness လို့လည်းခေါ်တယ်။ Pyrexia လို့လည်း ခေါ်ပြီး
DrMay ThantSyn	2019-04-29T18:59:48+00:00
🔺နွေနေပူပူအောက်က ကိုက်နေတဲ့ ခေါင်းတွေ🔺 တဖြည်းဖြည်း ပျက်စီးယိုယွင်းလာတဲ့ တောတောင် ရေမြေ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ နောက်မှာ ရာသီဥတုဖောက်ပြန်မှုတွေက သစ္စာရှိရှိလိုက်လာတယ်။ သီချင်းထဲကလို "အလွန်အေးတဲ့ရာသီ..အလွန်ချမ်းတဲ့ရာသီ" ဆိုပြီး ဆောင်းပီပီ မအေးခဲ့ပေမဲ့ နွေကတော့ မုန်းစရာကောင်းလောက်အောင်ကို လိုတာထက်ပို တာဝန်ကျေပြတယ်။ ပူလိုက်တဲ့ အပူရှိန်က
DrMay ThantSyn	2019-04-29T18:40:45+00:00
🌴ကိုယ်ပူကြီးလို့ 'တက်'သွား တဲ့ ကလေးတွေ အကြောင်း🌴 မိဘတိုင်း အကြောက်ဆုံးနဲ့ စိတ်အညစ်ဆုံးအရာက ချစ်မဝတဲ့ ကိုယ့်ရင်သွေးလေးတွေ နေမကောင်းဖြစ်မှာကိုပါပဲ။အဖျားအနာ ဆိုတာကလည်း ပန်းကလေးတွေလို နုနယ်တဲ့ ကလေးလေးတွေအတွက် ငယ်သူငယ်ချင်းတွေလိုပဲ တတွဲတွဲ မဟုတ်လား။ "ဆရာ..ကလေးက ကိုယ်ပူကြီးရင် 'တက်'သွားတတ်တယ်" လို့ ကလေးကိုယ်ပူလို့
DrMay ThantSyn	2019-04-25T11:16:51+00:00
👀 သင်္ကြန်လည်ပြီး မျက်ခွံရောင်လာရင် 👀 🎶 အဖြူကတစ်မျိုး..အနီကတစ်မျိုး.. ရေစိုပျိုမေတွေရယ် အလှကတိုး.. ဒီမဏ္ဍပ်ကအလှဆုံး..ဘယ်သူလည်းပြောကြပါဦး🎶 နွေရောက်ပြီဆိုတာနဲ့ သင်္ကြန်သီချင်းတွေက ရိုးရာမပျက် ရှေ့ပြေးအနေနဲ့ အရင်ရောက်လာမယ်။ ပြီးရင်တော့ တစ်နှစ်လုံးစောင့်ခဲ့ရတဲ့ ပျော်စရာသင်္ကြန်နေ့ရက်တွေရောက်လာမယ်။ သင်္ကြန်မိုးလေး တစ်ပြိုက်နှစ်ပြိုက်နဲ့ ပိတောက်ရွှေဝါတွေပါ ရောက်လာပြီဆိုရင်တော့ အားလုံးပြည့်စုံသွားပြီ။ ပျော်စရာနှစ်သစ်
DrMay ThantSyn	2019-04-25T10:48:01+00:00
🔷 စိတ်ဖိစီးမှုများက ဦးဏှောက်ကို ဖိရာဝယ် 🔷 'လူတစ်ခု ပူမှုရယ်တဲ့ဆယ်ကုဋေ' တဲ့။ 'လူဖြစ်ရတဲ့ ဒုက္ခ' တဲ့။ လူဖြစ်လာရင်တော့ ဖိစီးမှုတွေဆိုတာ မွေးကင်းစကနေ သေတဲ့အထိ ကိုယ်ရော စိတ်ပါ ရှိစမြဲ။ ပေါ်လာလိုက် ပျောက်သွားလိုက်။ နောက်တစ်ခုပေါ်လာလိုက် ပြန်ပျောက်သွားလိုက်။ ဒီလိုနဲ့ပဲ
DrMay ThantSyn	2019-04-23T17:00:59+00:00
💣 Social Media နဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာများ 💣 Social Media မကောင်းကြောင်းကို Social Media ပေါ်တက်ပြောရတာလည်း သိပ်တော့မကောင်း။ နည်းနည်းတော့ အားနာစရာ။ မိန်းမချက်ကျွေးတာ ပလုပ်ပလောင်းစားရင်း မိန်းမအတင်းပြောရသလိုပဲ သိပ်တော့ သဘာဝမကျလှ။ မိန်းမဆိုတာ မရှိမကောင်းရှိမကောင်းလို့ ပြောကြေးဆို
DrMay ThantSyn	2019-04-19T21:37:11+00:00
နေလောင်ခံနှုတ်ခမ်းများနဲ့ဗီတာမင်စီ အကြောင်း မိန်းကလေးတစ်ယောက်ရဲ့ ပြီးပြည့်စုံသောအလှတရားတွေထဲမှာ ပြည့်ပြည့်တင်းတင်းနှုတ်ခမ်းသားလှလှလေးတစ်စုံဟာလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်။ ကျန်းမာစိုပြေပြီး ဝင်းလက်တဲ့နှုတ်ခမ်းသားတစ်စုံရဲ့ ဆွဲဆောင်မှုဟာ ယောကျာ်းထုအပေါ်မှာတော့ အတော့်ကိုကြီးမားပါတယ်။ မိန်းကလေးမှမဟုတ်ပါဘူး အမျိုးသားတွေမှာလဲ ကျန်းမာပြီးယောကျာ်းပီသတဲ့နှုတ်ခမ်းသားတွေဟာ ကြည့်ကောင်းစွဲမက်ဖွယ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့အပြင် နှုတ်ခမ်းသားတွေကိုကြည့်ရုံနဲ့ လူတစ်ယောက်ဟာ ကျန်းမာရေး ကောင်းမကောင်းကိုလည်း အကြမ်းဖျဉ်းအကဲခတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကျန်းမာလှပတဲ့နှုတ်ခမ်းသားတစ်စုံဟာ လူတစ်ဦးတစ်ယောက်ရဲ့
DrMay ThantSyn	2019-04-19T21:23:32+00:00
သြချရလောက်သော ဗီတာမင်စီရဲ့ အာနိသင်များ ဗီတာမင်စီဆိုတာ လူတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်တစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ ဗီတာမင်စီကိုမထုတ်လုပ်နိုင်တာကြောင့် အစားအစာမှလိုအပ်တဲ့ဗီတာမင်စီကိုယူရပါတယ်။ ဗီတာမင်စီဟာ တစ်သှူးများကိုပြုပြင်ခြင်း၊အာရုံကြောထုတ်လွှတ်မှုစနစ်တွင်ပါဝင်ခြင်း၊ခန္ဓာကိုယ်အင်ဇိုင်းများရဲ့ လုပ်ငန်းဆောင်တာများတွင်ကူညီဆောင်ရွက်ခြင်းနဲ့ ကိုယ်ခံစွမ်းအားစနစ်ကိုကောင်းမွန်စေခြင်းအပြင် ဓါတ်တိုးဆန့်ကျင်သတ္တိ(Antioxidant)အာနိသင်ရှိခြင်း အစရှိသဖြင့် လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်များစွာအထောက်အကူပေးသော ဗီတာမင်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့ကြီးရဲ့ မရှိမဖြစ်ဆေးများစာရင်းတွင်ပါဝင်ပြီး ဈေးမကြီးပဲအလွယ်တကူဝယ်ယူရရှိနိုင်ပြီး လူတွေအတွက်အကျိုးပြုတဲ့ အာဟာရဓါတ်တစ်မျိုးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဗီတာမင်စီပေါကြွယ်ဝတဲ့ အစားအစာတွေကတော့
DrMay ThantSyn	2019-04-19T21:11:14+00:00
ဗီတာမင်စီက ရာသီ(ဓမ္မတာ)အပေါ်သက်ရောက်စေသလား??? ဒီတစ်ခေါက်တော့ယောကျာ်းလေးတွေနဲ့တိုက်ရိုက်မသက်ဆိုင်ပဲ မိန်းကလေးတွေနဲ့သာ သက်ဆိုင်တဲ့ အကြောင်းအရာလေးဖြစ်သွားပြီ။ ယောကျာ်းလေးတွေက ရာသီမှမလာပဲလေနော့။ ယောကျာ်းလေးတွေနဲ့က တိုက်ရိုက်သာ မသက်ဆိုင်ပေမယ့် သွယ်ဝိုက်ပြီးတော့ သက်ဆိုင်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ မိမိ၏ဇနီး၊ချစ်သူရဲ့ ဓမ္မတာလာစဉ်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ခံစားချက်၊နာကျင်ကိုက်ခဲမှုအချို့နဲ့ စိတ်မကြည်မလင်ဖြစ်မှုတွေဟာ အမျိုးသားတွေအပေါ်မှာပါ သက်ရောက်မှုရှိလို့ပါ။ ဒီလိုအချိန်တွေမှာ စိတ်ထိခိုက်/စိတ်အလိုမကျဖြစ်လွယ်တာ၊ရာသီကြောင့်ကိုက်ခဲတတ်တာတွေကြောင့် မိန်းကလေးတွေအနေနဲ့မိမိရဲ့ခင်ပွန်း၊ချစ်သူအပေါ်မှာ